जनता अनि जनताका प्रतिनिधि - नेपाली आवाज जनता अनि जनताका प्रतिनिधि - नेपाली आवाज
आजभाेलि देशका नागरिकलाई उल्लु बनाइ कसैलाई पार्टीमा जिताउनु सामान्य जस्तै भएको छ । अहिले त्यो विषयमा कुरा नगराैं तर जनताबाट जनताका लागि काम गर्छु भन्दै गएकाले अहिले पुरै संसदभवन नै अपवित्र बनाउदै छन । कुरा सुन्दैमा त आम जनताकाे कन्सिरि तातेर आउँछ भने भनि माग्नेलाई कस्तो भएकाे छ हाेला हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं ।
चाहे जे हाेस् सभामुख ज्यू, अब भने देशकै गरिमामा आँच आउने र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कुरा संसद भवनमा नगर्ने कि ? त्यहाँ हामी जनताले देशमा विकास र सुसासन कायम हाेस् भनि जिताएर पठाएका हाैं, नकि आफ्नो वा दलिय स्वार्थ पुरा गर्न ।
हेक्का रहाेस्, हरेक दुस्साहसकाे फल आज सम्मकाे इतिहासमा जनताले नेतालाई दिएकै छन् । जुन मत लिएर संसद भवन छिर्नुभएकाे छ नि, त्यसकाे कदर गर्न सिक्नुहोस् । नत्र भने इतिहासमा जस्तै जनताकाे जनलहर सिर्जना भइ तपाईंको पद, प्रतिष्ठा अनि अाजसम्मकाे जे जति छ, त्यसमा हजुरको कहिले पहुँच थियो र भन्ने दिन पनि आउला । यसतर्फ वेलैमा विचार पुर्‍याउने हो कि ?
सन्दीप र करण चम्किदा ओमान १२१ रनमा अलआउट, लिए ४/४ विकेट